Ukudla okujwayelekile kweVeracruz, ukuhlanganiswa kwe-autochthonous ne-Hispanic | Izindaba Zokuhamba
Luis Martinez | 24/05/2021 13:15 | Gastronomy, I-México
Ukudla okujwayelekile kweVeracruz kunesisekelo esibalulekile se- imikhiqizo yolwandle. Akusizi ngalutho, lesi sifunda siseGulf of Mexico futhi, hhayi nje kuphela ukuthi sinamakhilomitha amaningi asogwini, kepha futhi nedolobha elisinika igama laso linetheku elibaluleke kakhulu ezweni.
IVeracruz futhi kwakuyidolobha lokuqala iSpanish elasungula kulo I-México. Ngakho-ke, i- Ingxenye yaseSpanishi ikhona kakhulu ku-gastronomy yayo. Lokhu kuhlanganiswe ne isiko laseMesoamerican langaphambi kweColombia futhi nge izakhi zokudla kwase-Afrika nase-caribbean ukunika i-gastronomy enamandla njengoba imnandi maqondana nokunambitheka. Uma ufuna ukwazi kabanzi ngokudla okujwayelekile kweVeracruz, sikukhuthaza ukuthi uqhubeke ufunde.
1 Ukudla okujwayelekile kweVeracruz: Umlando omncane
2 Ukudla okujwayelekile kweVeracruz: Izitsha ezithandwa kakhulu
2.1 Inhlanzi yesitayela seVeracruz
2.2 I-Arroz a la tumbada, okunye okumnandi kokudla okujwayelekile kweVeracruz
2.3 Kugayiwe noma kucinjiwe
2.4 I-Zacahuil noma i-Sacahuil
2.6 I-mogo mogo
Ukudla okujwayelekile kweVeracruz: Umlando omncane
Konke esikutshele khona mayelana ne-Veracruz gastronomy kuyacebiswa, futhi, ngemikhiqizo etshalwe emazweni ombuso, evundile kakhulu futhi enhlobonhlobo yezinto eziphilayo ngenxa yesimo sezulu esishisayo nesishisayo.
Kepha into yokuqala esifuna ukukutshela yona ngumlando omncane wokudla okujwayelekile kweVeracruz. AbaseSpain baletha imikhiqizo eminingi ekudleni kwabo. Phakathi kwazo, ubhontshisi, irayisi, ukolweni nolamula. Kepha futhi nenyama efana naleyo ye- ingulube noma leyo hen namagugu anjengaye amafutha e-olive futhi i i-garlic.
Lapho sezisunguliwe emazweni aseVeracruz, abahlali abasha baqala ukutshala eminye imikhiqizo, eminye yayivele iyindabuko ekudleni kwangaphambi kweColombia, kanti eminye yayingathandwa kangako. Phakathi kwabo kwakukhona ummbila, the ikhofi nezithelo ezifana uphayinaphu, ukhukhunathi, i-sapote, umango, ugwava noma i-orange.
Kakade ngekhulu le-XNUMX, abokufika abasha bafika bevela ezingxenyeni ezahlukahlukene zomhlaba abacebisa isisu seVeracruz ngamasiko i-arab, caribbean futhi evela Amazwe aseYurophu. Konke lokhu kuholele ku- izinhlobo ezintathu cuisine ngaphakathi kokujwayelekile kwalesi sifundazwe saseMexico. Ake sizibone.
Ukudla kwesiCreole okunethonya lase-Afrika laseMelika. Njengoba igama layo liphakamisa, ifaka izinto zokupheka zaseSpain, zomdabu nezase-Afrika. Iningi futhi, phakathi kwemikhiqizo ejwayelekile eliyisebenzisayo, umdumbula, iSpanish eyayibiza ngokuthi yi-yam ngenxa yesici sawo esifana nalesi sigaxa sase-Afrika; ummbila; ushukela noma izinongo ezifana nembali yaseJamaica netamarind.
I-Huasteca cuisine. Kususelwa esikweni lika idolobha lentsha, etholakala engxenyeni esenyakatho yeVeracruz. I-protagonist yayo yangempela ummbila ezinhlobonhlobo ezahlukahlukene ezifana nomhlophe, onsomi noma obomvu. Phakathi kwezindlela zokupheka ezijwayelekile kukhona zacahuill, i-tamale noma inhlama, eyenziwe kahle ngommbila, ogcwele inyama evela ezilwaneni ezahlukahlukene; i imvukuzane de nopales futhi i umhluzi we-huasteco.
Ukudla kweTotonac. Ngokujwayelekile okufana nenyakatho, kusekelwe emmbileni uqobo, upelepele nobhontshisi. Phakathi kwezitsha zayo ezijwayelekile kunezinhlobo ezahlukene ze- atole (iziphuzo ezenzelwe ummbila ezivela ezikhathini zangaphambi kweSpanishi) kanye tamales.
Ukudla okujwayelekile kweVeracruz: Izitsha ezithandwa kakhulu
Njengoba sikutshelile, ukudla okujwayelekile kweVeracruz kunesisekelo esibalulekile se- izinhlanzi nezilwane zasolwandle, kodwa futhi kufaka phakathi okumnandi amasoso yenziwe ngemikhiqizo yasendaweni. Sizokukhombisa ezinye zalezi zitsha.
Inhlanzi yesitayela seVeracruz
Lesi sidlo sihlanganisa kahle lezi zinto zombili: izithelo zolwandle kanye nezomhlaba waseVeracruz. Kungenziwa nganoma iyiphi inhlanzi endaweni, kusuka ku-dogfish kuya ku-cabrilla nge-snook, tilapia kanye ne-basal. Noma kunjalo, okusetshenziswa kakhulu yi- inhlanzi i-Red snapper, owaziwa esifundeni njenge inhlanzi i-Red snapper, inhlanzi yasolwandle enambitheka kakhulu.
Kodwa-ke, imfihlo yalesi iresiphi ejwayelekile isososo, okuthi, ngokumangazayo, ungomunye wabambalwa abenziwe eMexico lokho hhayi ukuluma. Izithako zalo uwoyela womnqumo, iqabunga le-bay, usawoti kanye nopelepele, u-anyanisi, utamatisi, iparsley, ugarlic, i-oregano, iminqumo nama-capers.
Ukulungiswa kwayo kulula, ngoba, uma usosi usutholakele, wenziwa kanye nezinhlanzi eziko. Ngokuqondile ukuyinikeza ukuthinta okubabayo, kungangezwa i-cuaresmeño chili futhi wakhonza ngelayisi elimhlophe noma amazambane. Ngaphandle kokungabaza, isimangaliso sokudla.
I-Arroz a la tumbada, okunye okumnandi kokudla okujwayelekile kweVeracruz
I-Arroz a la tumbada, okunye kokudla okuyisisekelo ekudleni okujwayelekile kweVeracruz
Singasho ukuthi iyalingana ne- ukudla kwethu kwasolwandle paella, yize inezici zayo. Izithako zalo, ngaphezu kwelayisi, ziyizimfanzi, izinkalankala, izimbaza neminye imikhiqizo yasolwandle lapho a sofrito enziwe ngegalikhi, u-anyanisi, utamatisi nopelepele obomvu. Ekugcineni, ukunambitheka kwayo kuthuthukiswa ngamaqabunga e-parsley, i-oregano, i-coriander ne-epazote.
Kubukeka sengathi imvelaphi yalesi sidlo okufanele siyibheke ekudleni kwabadobi, ngekhulu le-XNUMX, abenza umsebenzi wabo ogwini lwaseVeracruz. Futhi, njengelukuluku, sizokutshela ukuthi ibizwa «ekulaleni» ukukhombisa ukuthi ikulungele isobho.
Kugayiwe noma kucinjiwe
Idume kakhulu maphakathi nesifunda, ayilutho olunye ngaphandle ama-tortilla ommbila ane-salsa ngaphezulu futhi kuhlotshiswe ngoshizi we-ranchero no-anyanisi. Bathola igama lika bancinzwe, impela, ngoba imiphetho yekhekhe icindezelwe ukuze isoso lingawi.
Babukeka izintambo Zenziwe kulo lonke izwe futhi, uma ufuna ukudla okujwayelekile eVeracruz, sizincoma ngoba zimnandi. Kodwa-ke, abomdabu besifunda bavame ukubathatha njenge desayuno.
Zacahuil noma Sacahuil
El UTamale Idume kakhulu, hhayi eVeracruz kuphela, kodwa nakuyo yonke iMexico. Njengoba wazi, kunjalo ummbila ophekiwe ogoqwe ngeqabunga lawo. Kodwa-ke, i-zacahuil ingumphumela we-Huasteca cuisine, njengoba sesikutshelile.
Impela yi i-tamale enkulu, mhlawumbe enkulu kunazo zonke ongayithola ezweni lonke. Kepha inomlando omningi. Inhlama yommbila ilungiswa kule recipe njengoba nje abomdabu benza emakhulwini eminyaka adlule. Ngakho-ke, kunikeza isisindo esibizwa ngokuthi nxtamal enezinhlamvu ezingaphansi komhlaba nokubukeka okuqhephukile.
Le nhlama igcwele Isinqumelo, upelepele kanye nenyama yengulube noma inyama ye-turkey, phakathi kwezinye izithako. Lesi sakamuva siyinyoni enkulu edabuka eMelika enokubukeka okufana neTurkey.
Ukudla okujwayelekile kweVeracruz kufaka phakathi amasobho esihlwabusayo kakhulu nokugcwalisa. Kuyindaba ye- chilpachole, ogama lawo livela kukhishi laseFrance. Ngoba ayikho nganoma yini enye ngaphandle kweyodwa isobho lokudla kwasolwandle Yenziwe ngenhlanzi nenkalankala (inkalankala ejwayelekile eluhlaza okwesibhakabhaka evela ezingwini zaseVeracruz).
Kodwa-ke, i-chilpachole inamandla kakhulu kunomhluzi wendabuko wasolwandle. Okokuqala, kunikezwa ukuvumelana ne- inhlama yommbila. Futhi, ngaphezu kwalokho, ino-anyanisi, upelepele omisiwe, utamatisi, ugarlic kanye ne-epazote. Zonke lezi zithako zinikeza ukuthungwa okufana ne- atole, isiphuzo semvelaphi yangaphambi kweSpanishi esesivele sishilo, yize lokhu ngokwesiko kumnandi.
Okhanyayo yi Izote umhluzi wezimbali. Isisekelo saso yilesi sitshalo somdabu saseMelika Ephakathi futhi futhi sivame ukuthwala imfanzi, amakhekhe, utamatisi, i-epazote kanye izindlebe zepipian. Ngokulandelayo, lawa yi-pasta eyenziwe ngembewu yethanga esetshenziselwa nezinye izitsha.
I-banana mogo, okunye ukunambitheka kokudla okujwayelekile kweVeracruz
Phakathi kwazo zonke izitsha ezijwayelekile zaseVeracruz, lokhu kungenzeka kungenye yezinto ezisobala kakhulu Izimpande zase-Afrika. Ngoba, kubizwa futhi machuco, akuyona enye into ngaphandle kokuthi i-puree eluhlaza okotshani.
Ukwenza, baphekwa ngesikhumba sabo emanzini abilayo. Lapho ukumbozwa kwabo kuqhuma, bayasuswa bese kufakwa ibhotela nosawoti ukuze bakuchoboze baze babe nokuthungwa okulungile. Kepha lesi sidlo asikakulungeli okwamanje. I-puree ishiywa ipholile efrijini ukuze iqine bese iyathosa. Imvamisa, izonikezwa njengohlangothi lobhontshisi.
Uma izitsha esishilo kuze kube manje zimnandi, amaqebelengwane eVeracruz awasekho emuva kakhulu. Cishe zonke izindlela zakhe zokupheka zisuselwa ukolweni futhi, phakathi kwamaswidi afuna ukwazi kakhulu, sizokhuluma nge chogostas, amanye amabhola anobumba oludliwayo futhi imvelaphi yawo isukela ezikhathini zangaphambi kweSpanishi.
Okunye ngokwesiko ama-duchesses, uhlobo lwama-tacos agcwele ukhukhunathi meringue, kanye amasamafini, amanye ama-polvorones embozwe ushukela nesinamoni. Ngokwakhe, i-tetamal Kuyinhlama yommbila noshukela enongwe nge-anise futhi isetshenziswe ishisa futhi isongwe ngeqabunga le-berijao.
La ithanga Ungumlingisi ophambili wamaswidi amaningana eVeracruz. Kuyindaba ye- fritters, yize, maqondana nalezi, i ama-gullets, ezigcwele i-meringue. Ekugcineni, i- pemoles zingumbila kakolweni, ibhotela noshukela futhi marzipan kusuka eVeracruz Kubonakala ngokuba namakinati esikhundleni sama-alimondi.
Sesivele sikutshele ngakho atole, enziwa ngezinongo ezahlukene kuye ngesithelo esilungiselelwe ngaso. Ngakho-ke, singakhuluma nawe nge-atole kabhanana, ithanga, ummbila noma i-coyol (isithelo esifana nekakhukhunathi). Iphinde idliwe eVeracruz the i-horchata, yize lingenziwanga njengaseSpain. Lapho yenziwa ngelayisi nesinamoni noma i-vanilla.
Okunye okujwayelekile kuseneziphuzo ezifana menyul, eyenziwe ngominti, kanye popo. Lesi sakamuva sizoba mnandi, njengoba sino cocoa, irayisi, isinamoni nezithelo ezifana ne-azquiote. Ekugcineni, i- inkunzi I-cocktail yotshwala enezithako zohlobo lwe-cane brandy, ubisi olujiyile nebhotela lamantongomane, yize nayo yenziwa namanye ama-flavour afana nemango.
Ekuphetheni, sikutshele mayelana ne- ukudla okujwayelekile kweVeracruz. Njengoba uzobona, kufaka nezitsha zazo zonke izinhlobo, ezimnandi kakhulu. Kepha iVeracruz ayiveli nje kuphela nge-gastronomy yayo, kufanelekile ukuvakashela, sikukhuthaza ukuthi nawe uhlole ongakuvakashela eVeracruz. Uma ungalinge ukwenze ngenxa yemikhawulo yalolu bhubhane, nayi i-athikili emayelana ne- izidingo zokuhamba amazwe ngakho-ke ungakwenza ngaphandle kokwesaba.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » América » I-México » Ukudla okujwayelekile kweVeracruz